अर्बौं सम्पतिका मालिक यी मेयर, जो काठमाडौं आउँदा हेलिकोप्टर चढ्छन् ! - Sidha News
अर्बौं सम्पतिका मालिक यी मेयर, जो काठमाडौं आउँदा हेलिकोप्टर चढ्छन् !
काठमाडौं। बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली पहिले सामान्य पेटी ठेकेदार थिए । ठेकेदारी गर्दागर्दै उनी राजनीतिमा लागेका हुन् । उनीसँग अहिले अर्बौंको सम्पत्ति छ । उनले छोटो समयमै आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई लिएर अहिले सत्तारुढ नेकपाभित्र ठूलै हलचल मच्चिएको छ । त्यही पैसाकै कारण उनले ढोरपाटन नगरपालिकाको प्रमुखमा टिकट पाएको बताइन्छ ।
नेपालमा उनी एक मात्र यस्ता धनाढ्य नेता हुन्, जो जिल्लाबाट पोखरा तथा काठमाडौं आउँदा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दछन् । उनकै आफ्नै निजी हेलिकोप्टर छ । घरको छतमै हेलिप्याड बनाएका छन् । यति त नेपालका एक मात्र खर्बपति भनिएका विनोद चौधरी पनि गर्दैनन् । उनी एयरपोर्ट भएको ठाउँसम्म हवाईजहाज र त्यसपछि गाडी नै प्रयोग गर्छन् । चौधरी अहिले नेपाली कांग्रेसबाट सांसद छन् ।मेयर नेपालीको काठमाडौंमा दुई तथा पोखरामा चारवटा घर रहेको बताइन्छ । बुर्तीवाङमा उनले दरबारजस्तो होटल खोलेका छन् । उनी करोड बढी मूल्य पर्ने रेन्जरोभर गाडी चढ्छन् ।
अर्बपतिको जस्तो जीवनशैली जीउने मेयर नेपालीको आर्थिक स्रोत भने देखिँदैन । धेरैले उनले अवैध गतिविधिबाट पैसा कमाउने गरेको बताउने गरेका हुन् । दश वर्षे द्वन्द्वकालदेखि नै उनी माओवादी निकट थिए । त्यसबेला माओवादीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था लुटेको सम्पत्ति राख्ने जिम्मेवारी उनैले पाएको बुझिएको छ । बाग्लुङमा हुने चरेश तस्करीमा उनको संलग्नता रहेको बताउने नेकपामा धेरै छन् । उनले एक तिब्बती महिलासँग दोस्रो बिहे गरेका छन् ।
मेयर नेपालीको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहामल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग निकै राम्रो सम्बन्ध छ । सोही कारण आफूलाई कसैले केही नगर्ने भन्दै उनले व्यापारी व्यवसायीलाई प्रभाव पार्ने गरेको नेकपा बाग्लुङका एक नेताले बताए । एकजना चुनाव जितेर आएका मेयरले अर्बौको सम्पत्ति कसरी जोडे होलान् ? अहिले जिल्लामा चर्चा हुने गरेको छ । स्रोतका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उनको अवैध सम्पत्तिलाई लिएर उजुरी हाल्ने तयारी भएको छ ।